မန်ယူခံစစ်ကစားသမားတွမ်ဇီဘီက ဗီဒစ်နေရာကို ဆက်ခံလိမ့်မည်ဟု ဟားဂရေစ့်ပြော… – FBV SPORT NEWS
မန်ယူခံစစ်ကစားသမားတွမ်ဇီဘီက ဗီဒစ်နေရာကို ဆက်ခံလိမ့်မည်ဟု ဟားဂရေစ့်ပြော…
October 23, 2020 By admin Sports News
မန်ယူခံစစ်ကစားသမား တွမ်ဇီဘီက ဗီဒစ်နေရာကို ဆက်ခံလိမ့်မည်ဟု ဟားဂရေစ့်ပြော…
မန်ယူကစားသမားဟောင်းအိုဝင်ဟားဂရေစ့်က မန်ယူမှာ အောင်မြင်မှုတွေတခေတ်တခါက ရယူခဲ့သူဖြစ်ပြီး ပွဲပေါင်းများစွာကစားခဲ့ကာ မန်ယူနောက်ခံကစားသမားဟောင်း ဗီဒစ်နဲ့ ကွင်းတွင်းကွင်းပြင် မှာပါ တော်တော်ရင်းနှီးတဲ့သူပါ….
MEN News မှာ အိုဝင်ဟားဂရေစ့်က မန်ယူလက်ရှိအခြေအနေကြောင်းနဲ့ အသင်းတွင်းအကြိုက်ဆုံးကစားသမားကိုမေးမြန်ခဲ့ရမှာ …အိုဝင်ဟားဂရေစ့်က ” နောက်တန်း အားနည်းချက်တွေရှိတယ်လို့ အများကပြောတော့ ကျနော် အချိန်တခုစောင့်ကြည့်ခဲပါတယ်…အဆိုးဆုံးအချိန်တွေကျနော်တို့တုန်းကလည်းရှိခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အချိန်တခုရောက်တော့ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်…လက်ရှိမန်ယူအသင်းလည်း ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ ဗီဒစ်လို နောက်တန်းစိတ်ချရတဲ့ လူငယ်ကစားသမား တွမ်ဇီဘီ ကို ပါခြေစွမ်းအသစ်တချို့နဲ့ ခေါ်ဆောင်လာပါတယ်…..
တွမ်ဇီဘီက နောက်တန်းမှာ တံတိုင်းကြီးတခုလို ကစားနေတော့မယ်ဆိုတာရယ်….. လင်ဒီလော့နဲ့ မက်ကွိုင်းယား တယောက်ယောက်နဲ့ တွဲကစားခိုင်းရပါမယ် သူရယ် ဝစ်ဘစ်ဆာကာရယ်မပါရင် မန်ယူနောက်တန်း စိုးရိမ်ဖွယ်ရာရှိတယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်….
ယူနိက်တက်နဲ့ချဲလ်ဆီးပွဲအပေါ် မိုက်ကယ်အိုဝင် ခန့်မှန်းချက်ထွက်လာပြန်